ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးသာသနာရေးမှူး၏စကားကို လိုသလို ဆွဲယူ၍ သတင်းဖော်ပြသော မီဒီယာများ သိစေရန် (မေး၊ဖြေ) … | ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးစု အသံ
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးသာသနာရေးမှူး၏စကားကို လိုသလို ဆွဲယူ၍ သတင်းဖော်ပြသော မီဒီယာများ သိစေရန် (မေး၊ဖြေ) …
Posted by danyawadi on April 4, 2013 in Articles, News, Specail
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးသာသနာရေးမှူး၏ စကားကို လိုသလိုဆွဲယူ၍ သတင်းဖော်ပြသော မီဒီယာများသိစေရန်
ရန်ကုန်မြို့၊ဗိုလ်တစ်ထောင်မြို့နယ်၊၄၈-လမ်း၊ရေကျော်ဗလီ မီးလောင်မှု နှင့်ပတ်သက်၍ ဧပြီ(၂)ရက် ညနေတွင်ပြုလုပ်သော တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ် ၏ သတင်းမီဒီယာများနှင့်တွေ့ ဆုံ ရှင်း လင်း ပွဲတွင် မီးလောင်မှုစုံစမ်းရေးကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးသာသနာရေးမှူး ဒု-ညွှန်ကြားရေးမှူးဦးအောင်ကြည်ကို မီဒီယာများမှ သိလိုသည်များ အလွတ် သဘော မေးမြန်း ခဲ့ကြပါ သည်။အဆိုပါဖြေကြားချက်များအပေါ် သတင်းမီဒီယာအချို့က လိုရာဆွဲကောက်နှုတ်ဖော်ပြနေသည်ကိုတွေ့ရှိရသဖြင့် ဧပြီလ(၄)ရက်နေ့က တိုင်းဒေသကြီးသာသ နာရေးမှူး အား သွားရောက်တွေ့ဆုံမေးမြန်းဖြစ်ခဲ့ပါသည်။
မေး။ ။ တိုင်းသာသနာရေးမှူးခင်ဗျား၊ ယနေ့ မီဒီယာတွေမှာဖော်ပြနေတဲ့ ဧပြီ(၂)ရက်နေ့ စာနယ်ဇင်းတွေ့ဆုံပွဲမှာ ပြောကြားခဲ့တဲ့ တိုင်းသာသနာရေးမှူးရဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း မှာ ရှိ တဲ့ ဗလီများဟာ တရားမ၀င်ဗလီများသာဖြစ်တယ်လို့ ပြောကြားခဲ့တဲ့အပေါ် ဘယ်လိုများ အတည်ပြုနိုင်ပါသလဲခင်ဗျာ။
ဖြေ။ ။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနစာရင်းအရ အစ်စလမ်ဗလီပေါင်း ၁၄၀ ခန့်ရှိပါတယ်။ ဗလီအများစုဟာ ကိုလိုနီခေတ်ကတည်းက တည်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ သာသနာရေးဌာနအနေနဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ ခရစ်ယာန်ဘာသာ၊ဟိန္ဒူဘာသာ၊ အစ်စလမ်ဘာသာ ဘာသာကြီးလေးခု နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ သာသနိကအဆောက် အဦတွေ ဆောက် လုပ်ခြင်း၊ ပြုပြင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး ခွင့်ပြုပိုင်ခွင့်မရှိပါဘူး၊
ဗလီများတည်ဆောက်ခွင့်၊ပြုပြင်ခွင့်ပြုခြင်းကို သာသနာရေးဌာနက လုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိပါဘူး၊လိုအပ်လို့ကျွန်တော်တို့ဌာနကို တင်ပြလာတဲ့အခါ ဌာနရဲ့သဘောထားမှတ်ချက်ကို “သာသနာရေး ရှုထောင့် မှကန့်ကွက်ရန်မရှိကြောင်း ဆောက်လုပ်ပြုပြင်သည့်အခါ တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့နှင့်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီတို့၏ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် အညီ ဆက်လက်တင်ပြဆောင်ရွက်ရန်” လို့သာ ပေးရပါတယ်။ဗုဒ္ဓဘာသာ သာသနိကအဆောက်အဦ၊ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းများနှင့်ပတ်သက်၍လည်း ယခုလိုပဲ သံဃနာယကအဖွဲ့နဲ့ သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းများရဲ့ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီဆက်လက်ဆောင်ရွက်ဖို့ မှတ်ချက်ပေးရပါတယ်။ ခွင့်ပြုခွင့်မရှိလို့ခွင့်ပြုလို့မရပါဘူး။ဆောက်လုပ်ပြုပြင်ဖို့လိုအပ် လာရင် လည်း သက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၊ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီတို့ကိုသာ တင်ပြဆောင်ရွက်ကြရပါတယ်။
ဒါကြောင့် ဧပြီ(၂)ရက်နေ့ သတင်းမီဒီယာတွေ့ဆုံပွဲမှာ မီဒီယာတွေ အလွတ်သဘောမေးမြန်းမှုကို တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ဆောက်လုပ်ထားတဲ့ ဗလီများအပေါ် ကျွန်တော်တို့သာသနာရေး ၀န်ကြီးဌာနအနေနဲ့မိမိရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်အရခွင့်ပြုထားခြင်းမရှိပါ လို့ ရိုးရိုးသားသား ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီဖြေကြားချက်ကို မီဒီယာတွေအနေနဲ့ ပြောလိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကို သဘောမပေါက်တာလား၊ လိုရာဆွဲတာလားတော့ မသိဘူး၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမှာ တရားဝင်ဗလီမရှိဆိုတဲ့ အနေ အထားမျိုးနဲ့ သတင်းဖော်ပြလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ ဒီလိုဖော်ပြချက်ကြောင့် အများကြီး အထင်အမြင်လွဲမှားစရာဖြစ်လာနိုင်တာကို သတိမမူပဲ မီဒီယာများအနေနဲ့လိုရာဆွဲကောက်နှုတ်ပြီး သတင်းအဖြစ်သုံးသပ်တင်ပြခြင်းဟာ သတင်းကျင့်ဝတ်အပေါ်လိုက်နာမှုအားနည်းတဲ့သဘောဖြစ်တဲ့အပြင် ကျွန်တော်တို့ ဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများမှာလည်း ၀န်ထုပ်ဝန်ပိုး ဖြစ်ရ တဲ့အ တွက် ဆင်ခြင်သင့်ပါတယ်လို့ပဲပြောချင်ပါတယ်။နောက်နောင်များမှာ ဌာနဆိုင်ရာများနဲ့ သတင်းမီဒီယာများ တွေ့ဆုံဖို့အခြေအနေပေါ်ပေါက်ခဲ့ရင်လည်း ရည်ရွယ် ချက်ပေါက်မြောက် အောင် ခြေခြေမြစ်မြစ်မေးမြန်းပြီးမှ ပြည်သူကို ချပြသင့်တယ်လို့ အကြံပြုချင်ပါတယ်။
CN.News credit to: Ko Win Naing
This entry was posted on April 6, 2013, in အင်တာဗျူး, ဆောင်းပါး, ပြည်တွင်းသတင်း. Bookmark the permalink.	Leaveacomment
← ဟာဖွဇ်မနန်းကျောင်းမှကျောင်းသားတစ်ဦး ဒါးတင်၍ ဆွဲလှီးလိုက်သော ဓါတ်ပုံ
ရန်ကုန်၊၄၈-လမ်း၊ဟာဖိဇ်ကျောင်းသားဓါတ်ပုံ သတင်း၊ Photo News: 13 Hafiz Muslim Students burnt alive in Swadikia, 48th St. Botataung, Yangon, Burma →